Hacettepeli Öğrenciler Solo Otobüs Uygulamasına Ne Diyor - RayHaber
[13 / 10 / 2019] Khadka Ankara Sivas YHT Line Dhamaadka dhamaadka! ..	06 Ankara
[13 / 10 / 2019] Mid ka mid ah hababka ugu ammaansan ee gaadiid	16 Bursa
[13 / 10 / 2019] Tareenka Hyperloop in la furi doono illaa 2040	1 America
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWaxa ay ardayda Hacettepe ku yiraahdaan Codsiga Solo Bas
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY 0
Waxa ay ardaydu dhahaan hacettepeli solo bas
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, oo dhageysta codka ardayda isla markaana dhageysanaya baahiyahooda, ayaa weli sii wadaya go'aannada ka farxiya ardayda.
Cinwaanka hal-ku-dhigga '' Capital-friendly student ', Mr. Yavaş, oo hirgeliyay adeegyo wax ku biirinaya dhaqaalaha ardayda meelo badan laga bilaabo biilasha biyaha iyo gaadiidka, ayaa fuliya ballanqaadyadiisa mid mid.
Madaxweyne Yavaş, oo bilawday dhimista 50 dhimista biilasha biyaha ee ardayda, ayaa dhowaan saxeexay go'aan si dhaw ula socda ardayda wax ka barata Jaamacadda Beytepe ee Jaamacadda Hacettepe.
BILAASH SOLO BILAASH OO LAGU SOO SAARAY
Marka la eego amarada Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, Agaasinka Guud ee EGO wuxuu bilaabay inuu siiyo adeegga 20 solo oo bilaash ah jaamacada Beytepe Campus, halkaas oo in kabadan kun kun oo ardayda 5 ah ay maalin walba celcelis ahaan u guuraan.
Baska 21 bilaashka ah ee ka baxsan 5 basaska xamuulka ayaa ardayda u kaxayn doona xero-gooyo laga baxo bixitaanka Çayyolu Metro inta u dhaxaysa saacadaha 7-06.30 maalinta 20.00 ee toddobaadka.
WAA KU SAABSAN CUDURKA YAVAA
Ardayda isticmaashay basaska lacag la’aan ah maalintii ugu horeysay ee arjiga waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin waxayna uga mahadcelinayaan Duqa Magaalada Yavaş ereyadan soo socda:
-Irem Aslan (21 sano): oldu Waxay ahayd go'aan aad u wanaagsan. Sababta oo ah amarka basasku waxay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa sugitaanka khadkaasna waxay noo noqdeen xanuun badan. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Madaxweynaheenna Mansur Yavaş maqalkayaga iyo helitaanka gaadiidkan bilaashka ah.
-Adem Üngör (24 sano): oldu Aad bay u fiicneyd in la helo codsi noocan ah inta u dhaxaysa saacadaha 6.30-20.00 maxaa yeelay waa saacadaha ugu mashquulka badan. Waxaan u mahad celinayaa Madaxweynahayaga. Başkan
-Adandan Yüksel (21 sano jir ah): “Waxaan u maleynayaa inay aad waxtar u lahayd. Aad bay iigu adkeyd inaan halkan ku sugo inta aan ku socday dugsiga. Aad baad ugu mahadsantahay adeegyada bilaashka ah.
-Esra Şahin (20 sano jir ah): ım Duqa Magaaladayada ayaa muujiyay inuu ka fikirayay ardayda tan iyo maalintii ugu horeysay ee uu xafiiska qabtay. Aad bay u fiicneyd in la helo basashan saacadaha ugu badan. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno Madaxweynaheenna Mansur. ”
- Sinan Uyar (19 sano jir ah): “Mansur Yavaş waa madaxweyne aan jecel nahay. U shaqaynta ardayda. Waxay taageertaa dhaqaalaheena. Wuxuu sidoo kale ansixiyay arrinta kaararka xirmooyinka ee 60 ee loogu talagalay 200 TL. Aad baad u mahadsantahay. ”
-Melih Toy (19 sano jir): uz Waxaan raacnaa shaqada Mansur Yavaş ee ardayda. Basaska kalida ah ee bilaashka ahi waxay yareeyeen safka baska iyo sugitaanka, oo xitaa way ka yaraadeen. Waxaan kaaga mahadcelineynaa taageeradiina. ”
-Meriery Muslim (20 sano): “Aad ayaan u jeclaa. Barnaamijkan baska ah ee bilaashka ahi aad ayuu ugu fiican yahay ardayda, sababtoo ah dhaqaalaha ardayda ayaa durba xadidan. Aad ayaan u mahad celinaynaa Mansur Yavaş. ”
60 TL iyo 200 fuushan arjiga kaararka diiwaangelinta ardayda, oo ah war kale oo wanaagsan oo uu bixiyay Madaxweyne Yavaş, ayaa sidoo kale bilaaban doona Oktoobar.
Ogeysiiska Qandaraaska: Gaasta Dabiiciga ah ee Shidaalka ah ee leh Kalluunka iyo Nooca Kaluunka 06 / 06 / 2013 Bellows iyo Solo Nooca Gas loo eryay baska Alınacaktır KONYA MAGAALO WEYNTA DEGMADA 100 Quantity (40 Bufinkii kasta nooca iyo Quantity 60 Solo Type) Gas loo eryay dayacan baska 4734 No. waxaa lagu Abaal marin by nidaamka furan by 19 qodobka sharciga soo iibsiga dowladeed. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan curdan yihiin hoos ku qoran: Lambarka Diiwaangelinta Qandaraaska: 2013 / 63053 1-Maamulka a) Cinwaanka: Merkez Mah. Vatan Cd. No. 2 Selçuklu / KONYA b) Telephone iyo lambarka fax: 3323551731 - 3323553745 c) E-Mail Address: satinalma@konya.bel.t waa saddex) gundhigga lagu arki karaa cinwaanka internetka (haddii ay khuseyso): https://ekap.kik.gov. en / EKAP / 2 - Mawduuca hindisada
33. Bandhiga Filimada ee Istanbul wuxuu leeyahay Renault Motor 07 / 04 / 2014 Festival Film Istanbul ayaa sheegay in Renault engine Renault, ayaa muddo dheer la siiyaa taageero ugu fiican adduunka ee ciidaha film wax isdhaafin, by Foundation Istanbul ee Dhaqanka iyo Farshaxanka abaabulan, oo sii wadi doona ilaa April 20 33. Waxay sidoo kale muujinaysaa Bandhiga Filimadda ee Istanbul. Cinwaanka Turkiga 100. Dhamaan da'daada, 33. furitaanka gala Renault Festival Istanbul Film ee, "Kharashka Film" magacyada caanka arkay qiimaha baabuurta ay Festival sharafeedka Awards baabuurta rooga cas. Renault Inta lagu jiro iidda, "Kharashka Film" casuumay si ay baabuurta dalka loo qaybinayaa in magacyada shisheeye caan ah. Intaa waxaa dheer, ka dib markii cinemagoers Renault on Facebook inuu ku guuleysto tikidhada filimada ugu filayo iid ee. Renault waa Renault oo awood leh
Rakaabka ayaa ka cabanaya laakiin IETT ayaa sheegaysa in hawo-mareenada metrobus ay ku filanyihiin 03 / 04 / 2013 Rakaabka ayaa cabanaya, laakiin cimilada IETT metrobüs waxay yiraahdaa ku filan Maalin kasta, boqolaal kun oo qof ayaa isticmaala line-ka metrobus waxay bixiyaan adeeg weyn. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah cufnaanta xad dhaafka ah, 'urta' kaas oo lagu sameeyay baabuurka ayaa sababa cabashooyinka rakaabka. Xilliyaadka IETT ayaa xakameynaya Howlaha hawo qabadkeena ayaa shaqaynaya. Qiiqa waxaa sababay xoogaa xad dhaaf ah. Jidka Rakaabka Rakaabka waxay filayaan in dhibaatada la xaliyo waqti gaaban. Gawaarida, kuwaas oo ah gaadiidka dadweynaha ee ugu doorbidan Istanbul, way ku dhowdahay in la neefsado inta lagu jiro saacadaha shaqada sababtoo ah xoojinta xad dhaafka ah. Xaqiiqada ah in hawo-qaboojiyeyaasha aysan ka shaqeynin gawaarida qaarkood oo ay weheliso urta ka imanaysa qaybta qatarta ee gawaarida waaweyn ee loogu talagalay kuwa ku safraya laadadka metrobus
Muxuu socdaa safarrada birta iyo shaqaalaha caafimaadku inoo sheegaan? 17 / 04 / 2013 Maxay tareenka rakaabka iyo sheybaarrada noo sheegi karaa? Shalay ayaa ah rakaabkii birta ahaa ee shaqo joojinta; Maanta waa maalinta shaqo joojinta shaqaalaha caafimaadka ee dhakhtarrada si ay u qabtaan qandaraasle! Ururka Shaqaalaha Isgaadhsiinta iyo Shaqaalaha Takwiilka ee Turk-Shaqada laguma daro shaqo joojinta tareenka, halka Health-jobs iyo Health Syndicate oo xiriir la leh Turk-Shaqadu ay xiriir la leeyihiin Turk-Shaqada halganka shaqaalaha caafimaadka. Dabcan, tani kama dhacdo maamulayaasha ururada shaqaalaha "Waa maxay meesha," waxay abuureysaa xaalad. Sababtoo ah maamulayaasha ururadani waxay u qalmaan ururadooda sida dirista ururka ". Laakiin shaqaalayaasha ka shaqeeya laanta kuwan, waxaa la oran karaa calanka ka soo horjeeda maamullada midowgaa ee aan dib loo dhigin. Sababtoo ah xukuumadda dawladda
ISKUULKA Gaadiidka, Gawaarida, wadada 21 / 10 / 2013 ISKUULKA Taraafikada, dhigashada iyo wadada wadada ayaa leh: ISPARK waa saldhigyada gaadiidka dadwaynaha ISPARK meel u dhow meelaha la dhigto meelaha la dhigo. Shirkadu waxay ka shaqeyneysaa inay abuurto aagag cusub sababtoo ah daneyn xoog leh. ISSPARK wuxuu dardargeliyay mashruuca 'Park Et, Devam Eti', kaas oo ay bilaabeen darawallada ka yimaada tareenada, metrobus, fayadhowrka iyo Marmaray gaadiidka doonaya in ay sii wataan gawaaridan, si dhakhso ah u kordhay danaha xad-dhaafka ah. ISPARK waxay dhiseen 34 baarkinka baabuurta ee 10 bin waxayna badbaadisay gaadiidka Istanbul oo ka yimid kolonyada baabuurta 100. Darawaliinta aan dhigan karin maadaama aysan laheyn meel baabuurtooda ah laakiin waxay u baahan yihiin inay gaaraan istaaga Metrobus illaa
Maalgashiga Nidaamka Tareenka ee Magaalada Istanbul waa la Dardargelin doonaa, Teknolojiyadaha Gudaha ayaa la Diiradda saari doonaa
Muwaadiniinta Kocaeli Oo Lagu Faraxeeyey Mobilka Mobilada
Turkey Italy Rail Investment iyo Xiriirka Ganacsiga
Ogeysiiska Qandaraaska: Gaasta Dabiiciga ah ee Shidaalka ah ee leh Kalluunka iyo Nooca Kaluunka
33. Bandhiga Filimada ee Istanbul wuxuu leeyahay Renault Motor
Rakaabka ayaa ka cabanaya laakiin IETT ayaa sheegaysa in hawo-mareenada metrobus ay ku filanyihiin
Muxuu socdaa safarrada birta iyo shaqaalaha caafimaadku inoo sheegaan?
Taageeraha Kocaelispor wuxuu leeyahay cagaaran wax taraamo madow ah
Maxay dadka ugu yeeraan Süleyman Karaman magacaabista Baarlamaanka (Video)
BTS ayaa sheegaysa in shilalka aan ka badnayn heerarka dhimashada ee dilka ah
Darawaliinta EGO waxay leeyihiin maya rabshad ka dhan ah dumarka
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (214) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)
FESPA Eurasia 2019 si ay ula kulanto Eurasia ee Istanbul
Nidaamka warbaahinta badan ee guryaha
Masters Show Masters